Yonke imihla ibhokisi yam yokungenisa inyuselwa ziinkampani ze-SEO zogaxekile abacela ukubeka amakhonkco kumxholo wam. Yimisinga yezicelo engapheliyo kwaye iyandicaphukisa. Nantsi indlela i-imeyile ehlala ihamba ngayo…
Xa abantu bangenisa amanqaku kum, ndihlala ndibabona besebenzisa amagama aphambili abonakalayo kwisicatshulwa sabo se-anchor. Andikholelwa ngokwenene ukuba ii-algorithms zikaGoogle zilula ngokuhlekisayo kangangokuba isicatshulwa esikwiqhagamshelo lakho kuphela kwamagama aphambili abalulekileyo. Bendingayi kumangaliswa ukuba uGoogle ahlalutye umxholo wokuqulatha ikhonkco. Andiqondi ukuba kufuneka ucace gca kumakhonkco akho. Nanini na xa ungathandabuzeki, ndincoma abathengi bam ukuba benze eyona ilungele umfundi. Kungenxa yoko le nto ndisebenzisa amaqhosha xa ndifuna abantu babone kwaye ucofe ikhonkco eliphumayo.
Kwaye ungalibali ukuba i-anchor tag inikezela zombini umbhalo kunye kunye isihloko kwikhonkco lakho. Izihloko luphawu lokufikeleleka ukunceda abafundi bokufunda bachaze ikhonkco kubasebenzisi babo. Nangona kunjalo, uninzi lwebrowser ziyazibonisa ngokunjalo. I-SEO gurus ayivumelani nokuba ukubeka isicatshulwa setayitile kunokunceda inqanaba lakho kumagama aphambili asetyenzisiweyo. Nokuba yeyiphi na indlela, ndicinga ukuba yinto elungileyo kwaye yongeza ipizazz encinci xa umntu ethe wagcoba ngaphezulu kwekhonkco lakho kunye nengcebiso.
Ukophula iThemba labafundi bam -Bandicela ukuba ndixoke kubaphulaphuli bam! Abaphulaphuli endibasebenzeleyo iminyaka eyi-15 ukwakha oku kulandelayo kunye nokufumana ukuthembela kubo. Akungaqondakali. Yiyo kanye le nto uza kundibona ndityhila lonke ubudlelwane kuwo onke amanqaku- nokuba lilinki lokudibana okanye umhlobo kwishishini.
Xa i-PageRank yaxoxwa okokuqala kwaye iibhlog zafudukela kwindawo, ukuphawula kwakuqhelekile. Ayisiyiyo kuphela indawo ephambili yokuba nengxoxo (ngaphambi koFacebook noTwitter), ikwadlula kwinqanaba xa ugcwalise iinkcukacha zakho zombhali kwaye ufake nekhonkco kumagqabaza akho. Izimvo zogaxekile zazalwa (kwaye iseyingxaki kule mihla). Akuzange kuthathe xesha lide ngaphambi kokuba iinkqubo zolawulo lomxholo kunye neenkqubo zokuphawula zifake amakhonkco angamaNofollow kwiprofayile zombhali kunye nezimvo.
Le yinyani enkulu yokuxabana nam. Iimeyile zogaxekile endizibonisileyo ngasentla ziyacaphukisa kwaye andinako ukuzimela. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba kufuneka njalo imali amakhonkco, ungaziceli. Umhlobo wam olungileyo uTom Brodbeck ubize ngokufanelekileyo oku linkearning. Ndidibanisa amawakawaka eziza kunye namanqaku avela kwindawo yam… kuba bayifumene ikhonkco.
Andenzi kufikelela… kwaye ndinamakhonkco aphantse abe li-110,000 adibanisa kwakhona Martech Zone. Ndicinga ukuba bubungqina kumanqaku endiwavumelayo kule ndawo. Chitha ixesha lakho upapasha umxholo omangalisayo… kwaye i-backlinks iya kulandela.
tags: ukufikelela kwi-backlinkukuxhuma umvakukunikaamagqabantshintshi ngezimvoukudalulwashushuDofollow amakhonkcoikhomishini yorhwebo yomdibanisoftcikhonkco lokukhangela kuGoogleImigaqo yenkonzo kuGoogleGoogle +Ungeniso lokuqhagamshelaumgangatho wekhonkcoukwakha ikhonkconofAmakhonkco angenasipheloUhlobo lokukhangela eziphilayoamakhonkco ahlawulweyoamakhonkco omgangathobazalwanarel dofollowi-rel engenantoixhaswe ngemalirel ugcabakhasayo kwiinjini yokukhangelaindawo yokukhangelaamakhonkco axhasiweyougcUgc amakhonkcoI-wordpress dofollowI-wordpress ayinanto
Enkosi ngokukhomba iDofollow iplagi uDoug. Bendisazi ukuba iWindowsPress yongeze i-rel = "ayilandeli" kwiikhonkco kumagqabantshintshi, kwaye ngokuqinisekileyo ndiyavumelana nelogic yakho ukuba nje amagqabantshintshi ayamodareyithwa, nawaphi na amakhonkco afanelekileyo ashiyekileyo kwizimvo afanelwe yityala labo elifanelekileyo.
Enkosi ngencam; Ndisandula ukufaka iplagi-ngaphakathi (inkqubo engenabuhlungu kwaphela.)
Kudliwanondlebe, ugaxekile wathi:
"Ngaba inyathelo likaGoogle, Yahoo kunye neMSN, ukuhlonipha" awulandeli "amakhonkco ayoyisa uSam kunye ne-ilk yakhe? "Andiqondi ukuba izakubanegalelo elifutshane, eliphakathi okanye elide."
Udliwanondlebe olupheleleyo lulapha:
Martin, inqaku elihle. Ndiyazibuza ukuba unzima kangakanani umsebenzi wakhe kunyaka ophelileyo!
Ngaba ikhona indlela yokukhetha ukuba yeyiphi ikhonkco endifuna ukuyivumela ilandelwe (wow, ulwimi olunomdla lokwakha endilwenzileyo)? Isizathu xa ndibhekisa indawo ethile e-crappy ngolwazi oluphambili kuyo, kungcono ndingayikhuthazi kakhulu. Hayi njengokunyanzelwa (ukuba ndibhekisa kuthi, yithi, uluvo lwezopolitiko olwahluke kakhulu kunolwam, kodwa ukuba lusekwe kakuhle kwaye lubekwe kakuhle, andinangxaki ekuyikhuthazeni), kodwa njengendlela yokulwa ne-entropy kunye nokumba Umxholo okrwada.
Andinangxaki ngokuhlela ngesandla amakhonkco. Ndihlala ndihlela amagqabantshintshi ukongeza amakhonkco aphumayo kuGoogle, izihloko zonxibelelwano kunye nokulungisa iindwendwe, kodwa kuya kuba kuhle ukuzenzekelayo ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile.
Ngokuqinisekileyo, iUg! Unokongeza i-rel = "nofollow" kuyo nayiphi na ikhonkco ongafuniyo ukuba uGoogle abeke kuyo Umzekelo:
Ewe, kunokuba lula kunokuzama ukuzicima. Ndizigcina zonke izinto ezisetyenziswa rhoqo ezinje kwiiNqaku zam ze-Opera (ziluncedo kakhulu ukuba neebits, iziqwenga, kunye neekhowudi zekhowudi kanye ngaphakathi kwisikhangeli sakho ngawo onke amaxesha), ke ikopi nje-unamathisele kum.
Ndiyifumene le. Kuya kufuneka ujonge ngaphambi kokunxibelelana nawe ngale fomu yoqhakamshelwano
Ndiyavuma uDoug. Ukuba uya engxakini yokufunda kunye nokumodareyitha ingxelo nganye phofu (ekufuneka ubuyiyo) kuyavakala ukuvuza amagqabantshintshi okwenyani ngekhonkco elifanelekileyo.
Uya kufumana ngaphezulu "Iposti enkulu" ngeziphumo, kodwa ezo ziye ngqo emgqomeni wokuphinda usebenzise kwakhona.
I-spammers ecacileyo inamagama anjenge- "SEO ingcali" okanye "uyilo lweWebhu yeAtlanta" okanye into ephambili elayishiwe. Abokwenyani bahlala benamagama okwenyani anje ngo "Lisa" okanye "Robert".
Kulungile ukuba uthathe ubume ngaphandle kokulandela umba. Nawaphi na amagqabantshintshi ngesiphumo? Ngaba ufumene iziphumo ojolise kuzo?
Iziphumo aziyi kubaluleka kum njengoko ziya kuba njengani bantu! Ukugqabaza kwindawo yam kufuneka kuncede kwizinga lakho kuGoogle.
Ndiqhuba iwebhusayithi eneDropal-powered, ke iyafaka ngaphandle kwe-rel = nofollow, kwaye kuya kufuneka ufake iplagi ukongeza oku. Nditsho malunga nokwenza oku okwethutyana, kodwa ndaqonda ukuba esona sizathu sokwenza njalo sisimvo sokubuza ukuba amagqabantshintshi endiwashiya kwiindawo zabanye abantu akandinikezi isikhundla sephepha, apho ndibanikeza inqanaba lephepha. Ndagqiba kwelokuba ndiwushiye unje.
Uninzi lwabantu lumodareyitha amagqabantshintshi abo ke kutheni bohlwaya abo bathatha ixesha lokushiya uluvo olulungileyo kule ndawo?
Ndongeze umgaqo-nkqubo wokubeka izimvo kwindawo yam ukuze ndingazisoli malunga nokususa amagqabantshintshi akwindawo engwevu.
Umzekelo, ukuba umntu ushiya uluvo athi "indawo entle", ndicebisa ukuba ndicime uluvo, ngaphandle kokuba bashiye indawo ye-URL ingenanto. Ngaphandle komgaqo-nkqubo onje, ndaziva ndinyanzelekile ukuba ndikhangele ikhonkco kwaye ndithathe isigqibo ngokusekwe kule ndawo.
Enkosi ngolwazi, ndithanda ukwazi tho.
abanye abantu bathi amaphepha asaza kufumana isalathiso kwithegi yokulandela. yinyani le?
Ewe, ayizizo zonke iinjini zokukhangela ezihloniphayo. Kwenzeka nje ukuba uGoogle, ukuba yinkwenkwe enkulu kwibhloko, ngaba kunjalo. Andiqinisekanga nge-Live, Ask or Yahoo! Kungathatha ukumba ukuze ufumane.
Umsebenzi olungileyo- andichasanga nanto.
Naliphi na ikhonkco kufuneka libalwe, okanye akufuneki uvumele ikhonkco ukuba libekho. Ndiyazi ngabantu abathi ngabom bongeze into engekhoyo kwizikhonkco kwizithuba zabo ukuze bangabinayo itoni yokuqhagamshela okuphumayo, kunye nethiyori yokuba iisayithi ezidibanisa ngaphezulu kunokuba zinxibelelene ne-PR esezantsi.
Senze okufanayo kwiblog yethu yeendaba kungekho nto ngaphandle kweziphumo ezilungileyo malunga negalelo lomsebenzisi kunye nejusi yokukhangela. 🙂
IMO rel = "nofollow" alunamsebenzi kwaphela, ayizukuyeka uluvo logaxekile kuba abenzi bokugaxeka basebenzisa isoftware. Esona sisombululo sisiso ngokuchasene nokubeka izimvo kumagqabantshintshi ziiplagi ezinje ngeAkismet, Ukuziphatha okungalunganga kunye neekaptas okanye imibuzo yabantu.
ewe? ezo wiki zibubudenge?
uyazibuza ukuba kwenzeka ntoni ukuba sonke sisebenzisa okulandelayo?
Molo, ndingathanda ukubuza ukuba i-WordPress, i-Yahoo 360, i-Blogger, njl njl. Sebenzisa "okulandelayo" kwizithuba zebhlog. Oko kukuthi, ukuba ndibhala iposti kwibhlog yam kwaye ndibeka ikhonkco kuyo, ingaba ikhonkco kwiposti yam liyatshintsha libe rel = nofollow?
Agasti 6, 2007 ngo-10: 50 PM
Enkosi kakhulu ngenqaku elisemagqabini malunga nophawu lokulandela. Kungenxa yokuba ifakwe njenge-default kwiWordPress, ndiyakrokrela ukuba uninzi lwabantu aluyazi nokuba lukhona.
Ndicinga ukuba umgaqo-nkqubo wokuvumela okanye ukungavumeli izimvo kumntu ngamnye kunokuba uzithobe zonke yindlela efanelekileyo kakhulu.
Agasti 15, 2007 ngo-3: 00 PM
Enkosi ngale posi! Ndiyazi ukuba ndilibazisekile ekuyifumaneni, kodwa ndiqale ukubhloga kwaye ndizama ukuqonda ukuba kutheni i-heck wordpress ibeka okulandelayo kwiindawo zam zonxibelelwano. Ndiza kufaka umbulelo ongafakwanga ekufumaneni ibhlog yakho, mhlawumbi oko kuya kukhuthaza amanye amagqabantshintshi kunye nokunxibelelana nebhlog yam entsha.
Andiqinisekanga ukuba inceda kangakanani ngokuthe ngqo ngokuthatha inxaxheba. Ndiyacinga, nangona kunjalo, ukuba 'iintaka zeentsiba zibhabha kunye' ukuze ukwazi ukudibanisa kwaye uthathe inxaxheba kwezinye iiblogi ezingasebenzisi nofollow. Ekuhambeni kwexesha, ndicinga ukuba kukho isibonelelo.
Ndiyayithanda nje kuba ndiyakholelwa ukuba impumelelo yam enkulu kubhloga ibikhe yenziwa ekuthatheni inxaxheba kwabantu abafana nawe kwincoko. Kutheni le nto kufuneka ndifumane lonke uncedo?!
Agasti 26, 2007 ngo-6: 58 PM
Enkosi ngolu lwazi uDoug, bendikhe ndongeza ngesandla i-rel kwiikhonkco zam kodwa khange ndiyithathele ingqalelo le ndlela yezimvo. Iyavakala nangona kunjalo, ndiza kuqala ukwenza oku kuba sele ndimodareyitha izimvo zam kwinqanaba elikhulu.
Molo, ndiyifakile DoFollow iplagi kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ndafumana umbulelo kwezinye iiblogi ezincinci endinxibelelanise kuzo kumanqaku nakumazwana am.
Inyathelo elihle kakhulu, kodwa KUPHELA ngokudibanisa nengcaciso engqongqo / ulawulo lomsebenzisi, kungenjalo iibhloko ziya kuba yimithombo yogaxekile ngokukhawuleza kunokuba sicinga.
Ngomhla wama-13 ku-Disemba 2007 ngo-8: 31 PM
doug, le nto ingekhoyo ibuhlungu ngokwenene kubhloga kunye nomsasazi osemthethweni… Ndinqwenela ukuba umntu enze iplagi eya kwenza / ikhubaze okulandelayo kwintando yomlawuli. Zonke iiplagizi ze-nofollo ndizisebenzisile ukukrazula ithegi engenanto kuwo onke amagqabantshintshi kunye / okanye umhlomli. Njengokuba usitsho, abanye abantu bayakhetha ukuvuma izimvo zabasebenzisi babo
Ndiyavuma, Jessie! I-WordPress iyifumene le ngxelo ngokuvakalayo nangokucacileyo, kodwa ndicinga ukuba banokuba bephantsi koxinzelelo kwiiNjini zokuKhangela ukuba bangayikhethi loo nto.
Into ehlekisayo yedoug kukuba uninzi lwabo "baxhasa" akukho nto ilandelayo baneempawu ezingafakwanga kwiindawo zabo / kwiibhloko. ayihlekisi into yokuba abantu bathethe into kwaye benze enye? ndikuthandile ukuba nofifi apha nje kwibhlog yam… andiqinisekanga ukuba oku kuyichaphazela njani i-PR yam kugoogle.
Enkosi ngokuchaza oku. Ndisandula ukuqalisa iwebhusayithi, kwaye ndikhangele kuzo zonke iindlela zebhlog. Ngelishwa isoftware ebhalwe enkonkxiweyo endinokuyisebenzisa kwindawo yam iyanuka emkhenkceni, kwaye bendicinga ukusebenzisa i-wordpress, ke enkosi ngokuthetha ngale ilandelayo okanye akukho mcimbi ulandelayo. Ndineewebhusayithi ze-2, enye engenayo i-google back link, kwaye ngolunye usuku indawo yam yesibini ibonise i-10 google backlinks ngaphandle kweblue, kwaye ndandonwabile ngokwenene! Ndithumela kwiiblogi ngalo lonke ixesha kwaye ndingazi nokuba ungafumana ikhonkco ngaleyo ndlela, (duh, newbie!) Kwaye ngequbuliso ndaye ndanamalinki ali-10 asuka kuDawud Miracle - ngubani kule heck ???? Ndalandela ikhonkco ndibuyele kwindawo yakhe kwaye ndaqonda ukuba yenye yeebhloko ezininzi endandizithumele, enkosi ngokungummangaliso, yayingu mmangaliso !!! Emva koko ndazibuza ukuba yenzeke njani, kwaye kutheni ingazange yenzeke ngaphambili! Ke ngoku ndiyifumene. Xa ndifumana isoftware yam yebhlog ngokuqinisekileyo ndiya kulandelwa, hayi uhlobo lokulandela. Kukho impumelelo eyaneleyo kuthi sonke .. ..